पूर्व माओबादीबाट केन्द्रिय सदस्य बनेका सुदुरपश्चिमका नेताहरु को कता ? | सुदुरपश्चिम खबर
पूर्व माओबादीबाट केन्द्रिय सदस्य बनेका सुदुरपश्चिमका नेताहरु को कता ?
धनगढी –नेकपा दुई समुहमा बिभाजन भएपछि सुदुरपश्चिममा पनि केन्द्रिय सदस्यलाई आ -आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत शुरु भएको छ । सुदूरपश्चिमबाट नौ जिल्लाका ३६ केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए । त्यसमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फका १४ र एमालेका २२ जना रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमसँगै ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि विभाजित बनेका छन् ।
तत्कालीन एमाले माओवादी एकता हुँदा माओवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका सुदूरपश्चिमका १४ मध्ये १३ जना प्रचण्ड नेपाल समूहमै रहेका छन् । तर एकजना तत्कालिन माओबादीका प्रमुख नेता लेखराज भट्ट ओली समुहमा रहेका छन् ।
तत्कालिन माओबादीबाट केन्द्रीय सदस्यहरु बनेका बैतडीका नरेन्द्र कुँवर, रेनु चन्द, दार्चुलाका लक्ष्मणदत्त जोशी, देवराज जोशी,अछामका तारामान स्वाँर, शरदसिंह भण्डारी, डोटीका त्रिलोचन भट्ट, कैलालीका वीरमान चौधरी, रुपा थारु, नेप बहादुर चौधरी प्रचण्ड–नेपाल समूहमै रहेका छन् । त्यसैगरी कञ्चनपुरका बिना मगर, देवीलाल चौधरी, तथा डडेल्धुराका खगराज भट्ट प्रचण्ड–नेपाल समूहमै लागेका छन् ।
बैतडीका बिरारामको हुडकेउली बजारमा